Wiase Nsɛm—Asase ne Ɛso Nneɛma | Nyan! June 2015
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Oromo Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Asase ne Ɛso Nneɛma
Asase ma yɛnya mframa, aduane ne nsupa. Nanso sɛe ara na nnipa resɛe nnepa a atwa yɛn ho ahyia no. Nyansahufo rehwɛ nea wɔbɛtumi ayɛ asɔ ano.
Nhwehwɛmu bi a wɔyɛe ada no adi sɛ nsupa pii wɔ po ase. Vincent Post a ɔwɔ Flinders University wɔ Adelaide kaa sɛ: “Bere bi a atwam no, na ɛpo nyiri mma soro sɛ nnɛ. Enti sɛ wokɔ mpoano a, na asase da hɔ yantam. Saa bere no, gye sɛ nsuo atɔ ansa na wɔahu sɛ ɛpo no ayiri. Nanso seesei, ɛpo no ayiri afa nsase pii ma akɔdi po ase.” Nyansahufo gye di sɛ bere bi bɛba a wɔbɛtumi de nsupa a ɛwɔ po ase no aboa nnipa bɛboro ɔpepem 700 a wɔnnya nsupa nnom no.
Bere bi a atwam no, na mmoa ahorow pii wɔ Sahara Anhweatam so. Nanso nnɛ, bebree ase ahyɛ. Kakra a aka no nso abɔ wɔn ho adwaa wɔ mmeae kakraa bi. Ntawntawdi a ɛrekɔ so wɔ aman ahorow so ne ahayɔ ka ho bi na aba saa. Nanso biribi foforo wɔ hɔ. Sɛnea mmoa ahorow ahorow wɔ kwae mu no, saa ara na ɛte wɔ anhweatam so. Nanso nnipa bi ayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ “nea ɛrekɔ so wɔ anhweatam so no, nyansahufo mfa wɔn adwene nsi so pii efisɛ wɔnnya sika a wɔde bɛyɛ mu nhwehwɛmu.” Wei nti, mmoa a wɔwɔ anhweatam so no ase rehyɛ, nanso ayɛ den ama bammɔfo a wɔhwɛ ɔdomankoma agyapade so sɛ wɔbɛbɔ wɔn ho ban.
Akontaabu kyerɛ sɛ woyi nnipa 8 biara a wɔwui wɔ afe 2012 mu si hɔ a, wɔn mu 1 deɛ mframa bɔne na ɛkum no. Wiase Nyinaa Akwahosan Ahyehyɛde no ka sɛ, “seesei mframa bɔne ne ɔhaw baako a ɛredi nnipa nya paa.”
SUSU HO: Nnipa a wɔwɔ adwempa rebɔ mmɔden sɛ wɔbɛhwɛ na yɛn asase yi ne ɛso nneɛma ansɛe, nanso ɛnyɛ yie. Adɛn ntia?—Yeremia 10:23.
Nnipa Bɛtetew Asase Apansam no Anaa?
Sɛnea nkurɔfo resɛe asase ne nea ɛbɛkɔ akɔwie nyinaa, Bible kaa ho asɛm too hɔ.